Nepal Auto | हाइवेमा सङगीतको आनन्द
हाइवेमा सङगीतको आनन्द 20 Ashwin, 2075
लामो दूरीको यात्रामा गाडी चढ्नेहरु धेरै छन् । उनीहरु बस वा कार, जिप, मिनी बस जुनसुकै सवारी साधनको प्रयोग गर्न सक्छन् । पट्यार लाग्दो यात्राको क्रममा उनीहरुले आफ्नो रोजाइका गीतको स्वाद चाख्न धेरै झन्झट बेहोर्नु पर्दैन ।
यात्रुको इच्छाबमोजिम चालकले गीत बजाउ“छन् । पेनड्राइभ र कम्प्युटर प्रविधिमा अधारित मल्टीमिडिया सिस्टमका कारण यो सम्भव भएको हो । ‘विगतमा एउटा क्यासेट, सिडीवाट वढीमा ८ वटा गीत प्ले गर्न सकिन्थ्यो’ अग्नी यातायात सेवाका कर्मचारी बाबुराम भन्छन् –‘अव त्यस्तो अवस्था छैन, एउटै पेनड्राइभमा सैयौं गीत संग्रह गरेर वजाउन सकिन्छ ।’ यो माध्यम विगतमा भन्दा सहज र सस्तो समेत भएको उहा“को भनाइ छ ।
पहिले–पहिले क्यासेटमा पा“च÷छ वटा मात्र गीत अटाउथ्यो । त्यसलाई प्लेयरमा राखेर वजाउनु पनि झन्झटिलो हुन्थ्यो । तर, अव विगतमा जस्तो सीमित गीतमा खुम्चनुपर्ने वाध्यता रहेन । यात्रुको फर्माइस अनुसार चालकले थरीथरीका गीत वजाइदिन सक्छन् । डिजिटल स्टेरियो साउण्ड सिस्टम र पेनड्राइभ भित्रिएपछि पट्यारलाग्दो यात्रामा संगीतको मज्जा लिन सकिएको हो ।
गीत सुन्दै आन्नदसाथ यात्रा गर्ने जमाना पनि फेरिन लागेको अनुभव सुनाउछन् कीर्तिपुर—रत्नपार्क रुटमा यात्रा गर्ने कीर्तिपुर बाघभैरवका कृष्ण महर्जन । उनी भन्छन्—‘अहिले माइक्रो बसहरुले यात्रुको मनोरञ्जनलाई ध्यानमा राखेर एलसिडी माइक्रो मिडिया सिस्टम राख्न थालेका छन् । १४ इन्चको भिडियो डिस्प्ले हो यो । यसबाट म्युजिक भिडियो प्ले गरेर आफुलाई मनपर्दो गीत सुन्न तथा हेर्न सकिन्छ । साथै ट्राफिक नियमदेखि यात्रुले यात्राका क्रममा अपनाउनु पर्ने सतर्कता वारे समेत ‘माइक्रो मिडिया’ मार्फत सूचना प्रवाह भैरहेको हुन्छ । यसले मनोरञ्जनका साथै उपयोगी सूचना समेत दिएको छ ।
धेरै समय अघिदेखि नै लामो दुरीको रात्री वसहरुमा ‘भिडियो कोच’ सेवा सञ्चालन भएको थियो । यि वसहरुमा ठूलो सिआरटी मोनिटर प्रयोग गरिएको हुन्थ्यो, जुन त्यती छरितो हुदैनथ्यो । बसमा गह्रौ टेलिभिजन सेट राखेर भीसीडी र सीडी डेकबाट फिल्म देखाउने यो चलन विस्तारै विस्तापित हुदै गएको काठमाण्डौ—धनगढी चल्ने खप्तड बस सेवाका कर्मचारी किशोर चन्द बताउछन् । खप्तड बस सेवाले एयर कन्डिसनयुक्त वस सञ्चालन गरिरहेको छ । ‘अहिले अत्यन्तै हलुको, बिजुली कम खपत गर्ने एलसिडी तथा एलइडी भिडियो प्रयोग हुन थालेको छ’ उनी थप्छन्–‘यसमा पेनड्राइभ प्रयोग गरेर फिल्म गीत हेर्न पनि सकिन्छ ।’
कीर्तिपुरका हिरा महर्जनको टोयोटा कारमा पुरानै किसिमको म्युुजिक सिस्टम छ । गीत सुन्न तथा समाचार सुन्न मिल्ने एफएम रेडियो कारमै जडित छ । तर, पछिल्ला गाडीहरुमा यस्तो प्रविधि हटाइएको छ । बागेश्वरीका डा. मोहनराज प्रधानको मारुती सुजुकी कारमा पनि ‘इनबिल्ट’ म्युजिक सिस्टम छ । एलसीडी डिसप्लेबाट घडी हेर्न मिल्ने, एफएम रेडियो सुन्न मिल्ने र क्यासेट प्लेयर बजाउन मिल्ने उक्त प्रविधि पुरानै भएको डा मोहनराज प्रधान बताउछन् । त्यसो त पुराना मोडलका अधिकांश गाडीमा भद्दा शैलीको म्युजिक सिस्टम रहेको पाइन्छ । यस्ता म्युजिक सिस्टम गाडीवाट हटाउन तथा नया“ राख्न निकै झन्झट हुने वताइन्छ ।
यात्राका क्रममा संगीतको मज्जा लिने शैली पुरानै हो । सन् १९२३ देखि गाडीमा क्यासेट प्लेयर तथा रेडियो राख्न थालिएको पाइन्छ । प्रारम्भमा चारपाङग्रे हलुका सवारीसाधनहरुमा रेडियो प्रविधि मात्र राख्ने गरिन्थ्यो । तर अहिले यो प्रविधिमा ठूलै वदलाव आएको छ । परम्परागत यो प्रविधिले अहिले डिजिटलमा फड्को मारिसकेको छ ।
नेपालमा माइक्रो मिडिया सिस्टमको जमाना छ भने पश्चिमी देशका चालकहरुले ‘आइपोड’ बाट म्युजिकको आनन्द लिन्छन् । अझ यो प्रविधि विकसित हुने क्रममा छ । हाल यात्रु वा चालकले आफ्नो इच्छा अनुसारको गीत सुन्न, हेर्न मात्र होइन, फोन, च्याटदेखि इमेलसम्म गर्न सक्छन् । विभिन्न कम्पनीहरुले इन्फोटेनमेन्ट सहितको सिष्टम उपलब्ध गराएका छन् ।
सन् १९३० देखि ५० को दशकसम्म कार लगायत अटोहरुमा जडान हुने रेडियो गीतसङगीत र समाचार सुन्ने सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम थियो । सन् १९५८ मा त्यही प्रविधि परिमार्जन गरेर आवाज प्रष्ट सुन्न सकिने एफएम प्रविधि जडान गर्न थालियो । यो प्रविधि सन् १९६० सम्म लोकप्रिय रह्यो । त्यसपछि थप सुधारिएको क्यासेट प्लेयर प्रयोगमा आयो । ‘हाइफाई अन द हाइवे’ भनी प्रचार गरिएको यो प्रविधि लामो समय टिकेन । अव चाहि सूचना र मनोरंजन दुबै एकसाथ प्रदान गर्ने ‘इन्फोटेनमेन्ट’ प्रविधि आएको छ । तर ‘इन्फोटेनमेन्ट’ प्रविधि सबै सवारी साधनहरुमा राख्न गाह्रै हुने जानकारहरु वताउ“छन् ।
कारको चाबी हरायो ? नो प्रोब्लम, अब स्मार्टफोनबाटै खोल्न सकिने
कारको चाबी हराएमा कसरी खोल्ने भन्ने चिन्ता हुन्छ । तर अब चाबी हराए पनि चिन्ता गर...
निर्वाचनका लागि भारतले दियो ८६ वटा गाडी
काठमाडौं – भारत सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आठ करोड ९१ लाख रुपैया...
December 20, New Delhi : Hyundai Motor India Ltd won the Indian Car of the Year...